मनोरञ्जन - जागरण अनलाइन
चर्चित लोक गायिका शर्माको तीज गीत ‘चौतारी’ सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका एवम् सञ्चारकर्मी शितल शर्माले तीज गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । नेपाली हिन्दु नारीहरुको महान चाड तीजलाई लक्षित गरि गीत सार्वजनिक गरिएको हो । धेरैजसो गीतको बजारमा ब्यापक चर्चा पनि छ । गीतमा प्रयोग गरिएको मौलिकपना र भावले गीतलाई अझ जीवन्त बनाएको छ । पछिल्लो समय समाजमा पारिवारिक कलहले
२०७६ श्रावण ४, शनिबार १९:५२
घोराही । । तनहुँको थर्पुमा जन्मिएकी कला लम्साल, नेपाली लोक गायन क्षेत्रमा उदाउँदो नाम बनाउन सफल भएकी छन् । तनहुँकी गायिका भनेर देश विदेशमा चिनँदै आएकी कला लम्सालले यस वर्षको तीजलाई ‘पातली ‘बोलको गीत कोसेली बजारमा ल्याएकी छिन् । शिव हमालको शब्द तथा लयमा बजारमा आएको गीतमा कला लम्साल संगै करिस्मा ढकालले अभिनय गरेकी छिन्
कविता: माननीयज्यू अब त अति भएन र ?
स्वाभिमान आचार्य बोल्न लेख्न पाइएन राजा को एकछत्र राज भो जनता पिल्सिए गरिबी बढ्यो यसरी हुँदैन न्यायको लागि लड्नुपर्छ भनियो सुन्दर भविष्यको खोजीमा आमा बुवाको पुस्ता लड्यो क्रान्ति ल्याइएनछ भनियो बहुदल त आयो तर विचरा जनता , अह जस्ताको तेस्तै भोको भोकै रह्यो , तिमी चाँही माननीय भएछौ गरिबको झुपडी उस्तै रह्यो , तिमीलाई सिंहदरबारमा
२०७६ बैशाख १४, शनिबार २२:१९
गेहेन्द्र बस्नेत, कार्यकारी निर्माता– चलचित्र लावाजुनी पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले खास नयाँ अभियान त केही सञ्चालन गरेको छैन । व्यवसाय, राजनीति र सामाजिक गतिविधिहरुमा सक्रिय छु । बरु अब चाँडै चलचचित्र लावाजुनीको प्रदर्शनको तयारीमा जुट्दैछु । लावाजुनीको कुरा गर्नुभयो । साँच्चै कहाँ गयो तपाइँहरुको लावाजुनी चलचित्र ? लावाजुनीको सबै काम सकिएको छ । केही दिनमै
२०७५ चैत्र २, शनिबार ०८:३१
विन्दुको गितमा हृयाट्रिक, “घरबार” फेरी चर्चामा(भिडियोसहीत)
ध्रुवराज न्यौपाने ( डि.आर.एन.), दाङ, फाल्गुन १३ । चलचित्र मंगलमको पर्ख पर्ख मायालु र छक्का पञ्जा ३ को पहिलो नम्वरमा बोलको गित गाएपछि एकाएक चर्चामा आएकि विन्दु परीयारको पछिल्लो समयमा फेरी पनि उत्कृष्ट गित ‘घर बारमा’ सार्वजनिक भएको छ । दाङ जिल्लामा जन्मिएकी विन्दुले गितलाई नै आफ्नो भविष्य ठानेर वि.स. २०६६ सालमा तत्कालिन रेडियो सर्यु
२०७५ फाल्गुन १३, सोमबार १८:३५
प्रेम दिवसको अवसर पारेर चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ को पहिलो रोमान्टिक गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘घाम जून चाहिँदैन’ बोलको गीतमा सुगम पोखरेल र रेश्मा पुन मगरको स्वर रहेको छ भने शब्द दीपक शर्मा र उषा शेरचनको, संगीत दीपक शर्माको रहेको छ । रोमान्टिक गीतमा प्रदीप खड्का र जसिता गुरुङ फिर्चड छन् । भिडियो हेर्नुहोस :-
२०७५ फाल्गुन ८, बुधबार २०:२१
गायिका सिर्जना कार्कीको स्वर र उनकै सङ्गीतमा रहेको ‘कान्छा’ बोलको मारुनी गीतको म्युजिक भिडियो युटुबमार्फत सार्वजनिक भएको छ । यस अघी ‘धेरै धेरै’ ‘मनको राजा’ ‘माया’ तथा ‘रोजेको मैले’लगायत सुमधुर गीतबाट श्रोताको अत्याधिक माया पाएकी गायिका कार्कीले यो म्यूजिक भिडियो आफ्नै युटुब च्यानल सिर्जना कार्की मार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन । प्रायः सबै गीतमा कर्णप्रिय सुनिने
२०७५ माघ २, बुधबार १७:४९
गायिका पारु रञ्जितले ल्याइन् नयाँ गित ‘उडी जाने चरीलाई’(भिडियोसहीत)
काठमान्डौ । गायक केशब बिश्वकर्मा र गायिका पारु रन्जित”ले संयुक्त रुपमा ‘उडी जाने चरीलाई ‘गीतको भिडियो नेपाली गीत संगीत बजारमा ल्याएका छन् | उक्त गीतमा गीतकार, गायक केशब बिस्वकर्माकै रचना तथा संगीत रहेको छ | प्रदेश जीबनीलाई र आफ्नी मायालुलाई गाउँ घरमा छोडेर जाँदाको पिडा र प्रदेशमा दुख: गरेता पनि हरदम आफ्नी मायालूलाई सम्झीएर उक्त
२०७५ पुष २९, आईतवार २३:३९
‘रोयल्टी’ कानुनमा समावेश गछौं :कोमल वली
काठमाडौं / राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले कलाकारहरुले माग गरेको ‘रोयल्टी’ सम्बन्धि मागलाई कानुनमा समावेश गर्ने बताएकी छिन् । शनिबार काठमाडौंमा नेपाल सांगीतिक संघको १९ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले केन्द्रीय संसदले कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै वौद्दीक सम्पत्तिको रक्षार्थ स्रष्टालाई शिरमा राखेर कानुन संसोधन गर्न लागेको बताईन् । त्यस अवसरमा बरिष्ठ संगीतकार दिपक जंगमले श्रष्ठाहरुवीचमा
२०७५ पुष २९, आईतवार २१:३९
गायिका पारु रंजितले नयाँ गित ल्याइन ‘उडी जाने चरीलाई’ (भिडियोसहीत)
गायक तथा गीतकार केशब बिश्वकर्मा र गायिका पारु रन्जित”ले संयुक्त रुपमा ‘उडी जाने चरीलाई’ गीतको भिडियो नेपाली गीत संगीत बजारमा ल्याएका छन् । उक्त गीतमा गीतकारर गायक केशब बिस्वकर्मा”कै रचना तथा संगीत रहेको छ । जीबनीलाई र आफ्नी मायालुलाई गाउँ घरमा छोडेर जाँदाको पिडा र प्रदेशमा दुःख गरेता पनि हरदम आफ्नी मायालूलाई सम्झीएर उक्त गीत
२०७५ पुष २७, शुक्रबार २२:३९
घोराहीमा न्यू देउराली दोहोरी साँझ
घोराही, २७ पुस घोराहीमा न्यू देउराली दोहोरी साँझ सुरु भएको छ । घोराहीमा सञ्चालनमा रहेको देउराली दोहोरी साँझ नयाँ व्यवस्थापनकासाथ न्यू दोहोरी साँझको नाममा सञ्चालनमा आएको छ । तुलसीपुर चोकदेखी पश्चीमतर्फ रहेको दोहोरी साँझको शुक्रवार उद्घाटन गरिएको छ । दोहोरी साँझको दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर डाँगीले गरेका हुन् । साँझको उद्घाटन गर्दै
२०७५ पुष २७, शुक्रबार २१:४५
झक्कडको आफ्नै कथामा आएको गीतको (भिडियो हेर्नुहोस्)
नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिङ्गिग रियालिटी शो नेपाल आईडलबाट अचम्म किसिमको गीत गएर पनि देश बिदेश मा चर्चा कमाउन सफल व्यक्ती झक्कड थापा ले आफ्नो जीवन कहानी सँग ठ्याक्कै मेल खाने गीत बजारमा लिएर आएका छन |जत्तिनै चर्चा परीचर्चा पाएपनी आफ्नो दैनिकी र गुजराको लागि पुन आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने र अहिले आफुले पनि नेपालगन्ज मा गएर
२०७५ पुष २६, बिहीबार २१:४३
फरक पहिचानमा ‘सुजाता’
लिलाधर वलि दाङ । बुवा कालिचरण चौधरी र आमा बिष्णु चौधरीको कोखबाट २४ वर्ष पहिले छोराका रुपमा जन्मीएका दिपेश चौधरी अहिले तेस्रो लिङ्गी सुजाता खड्का रुपमा चिनिन्छिन् । घरमा पहिलो सन्तानका रुपमा छोरो भएर जन्मीएका उनी छोरीको भुमिकामा देख्दा सुरुमा घरपरिवार नै अलमलमा परेका थिए । छोरोलाई के भयो किन यस्तो गर्छ भन्ने लगायतका कारणले
२०७५ पुष २२, आईतवार १२:२२
मुखमा बाजा बोकेर हिड्ने निश्चलको ईन्टरनेशनल विट बक्सर बन्ने सपना
घोराहीका निश्चल न्यौपाने अहिले चर्चामा छन् । उमेरले १४ वर्षका निश्चल मुखबाट विभिन्न बाजाका धुनहरु निकाल्ने अदभुत कलाका कारण उनि अहिले चर्चामा छन् । आफ्नो मुखबाट विभिन्न सांगीतिक धुन निकाल्न सक्ने कलालाई म्युजिक बिट बक्स भनिन्छ । निश्चलले दाङमै पहिलो पटक विट बक्सको कार्य सुरु सुरुवात गरेका छन् भने देशमै यस्ता कलाकारहरु दुर्लभ छन् ।
२०७५ पुष १, आईतवार १७:५६
सन्तोष खनाल रेशम सापकोटा नाम सुन्नेबित्तिकै जो कोहीले पनि भजन चुड्का, चेलीका तीज गीत र सामाजिक परिवेश झल्कने मौलिक गीत संगीत मात्रै नभई पेट मिचीमिची हँसाउने ठट्यौली गीत सम्झने गर्दछन्। बाग्लुङका रेशम कलाकार मात्रै नभई सामाजिक अभियन्तासमेत हुन्। गीत संगीतमार्फत उनले समाजमा विसंगति उजागर गर्दै असल मार्ग देखाउने काम गरिरहेका छन्। समाजमा जे हुन्छ, त्यही
सकियो ‘प्रेमनाथ’ को छायांकन
काठमाडौं २० मंसिर / गणेश बेलबासेको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘प्रेमनाथ’को छायाँकन सकिएको छ । केही दिन अगाडि पशुपतीमा बाबाजीहरुको दृश्य खिच्दै निर्माण युनिटले चलचित्रको छायाँकन सकाएको हो । ‘चलचित्र प्रारम्भिक सम्पादनमा जुटिसकेको छ’ निर्देशक बेल्बासेले भने ‘२,४ दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि डबिङको काम थालिनेछ ।’प्रेम कथाको बिषयमा बनेको ‘प्रेमनाथ’को सम्पादन अनन्त घिमिरेले गरेका हुन् । दाङ,
२०७५ मंसिर २०, बिहीबार १६:२२
काठमाडौ । कर्मथलो काठमान्डौ बनाएकि पारु रञ्जित कलाकारीताको क्षेत्रमा अरुभन्दा आफुलाई अब्वल छिन् । सानै उमेरदेखी गायन क्षेत्रमा रुचि राख्दै आएकि पारु अहिले चर्चीत कलाकारहरुको पङ्त्तिमा आफ्नो नाम उभ्याउन सफल भएकि छिन् । गाँउ घरमा र विद्यालयमा नै गायन क्षेत्रमा रुचि राख्दै आएकि पारु अहिले नाम चलेको कलाकारकोरुपमा स्थापित भइसकेकी छिन् । उनले आफ्नै स्वरमा
स्टेज क्वीन भूमिकाले ल्याइन् ‘तारासँगै जून’
“स्टेज क्वीन भूमिकाले ल्याइन् ‘तारासँगै जून’ “काठमाडौं । ‘स्टेज क्वीन’को उपमा पाएकी भूमिका गिरीले बिहेको लगनको मौका छोपेर पञ्चेबाजाको धूनमा नयाँ लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । ‘तारासँगै जून, बिर्स्यौकि मायाँले मैले लाको गुन’ बोलको गीत शुक्रबार साँझ युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएको हो … काठमाडौं । ‘स्टेज क्वीन’को उपमा पाएकी भूमिका गिरीले बिहेको लगनको मौका छोपेर
२०७५ मंसिर १५, शनिबार १६:०७
अहिले फिल्म बनाएर मात्र प्रयाप्त छैन । दर्शकलाई हलसम्म तान्न गतिला गीतसंगीत पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । केही वर्षयता नेपाली फिल्ममा लोक फ्लेवरका गीतको राम्रै बोलबाला देखिएको छ । ‘सुर्के थैली खै ?’, ‘गोजीमा दाम छैन’, ‘पहिलो नम्बरमा’, ‘रुपै मोहनी’ गीतले नेपाली बजारमा धूम नै मच्चाएका छन् । गीतका कारण पनि फिल्मको इनिसियल बक्सअफिस आक्रामक
संगीतकार नरेश खाती क्षत्रीको गीत बिन्ध्यवासिनी अवार्डमा प्रतिस्पर्धा गर्दै
काठमाडौं । संगीतकार एवम् गायक नरेश खाती क्षत्रीको लोकदोहोरी गीत ‘रुदै रुदै तिम्रो शहर…’ बोलको गीत बिन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्डमा मनोनयन सहित कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको छ । बिन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्ड मनोनयनमा परेको यो गीतलाई भोटिङ गर्न संगीतकार खातीले आग्रह गरेका छन् । ‘मेरो गीत बिन्ध्यवासिनी म्युजिक अवार्डको मनोानयनमा परेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘दर्शक स्रोताहरूले भोटिङ
२०७५ कार्तिक २५, आईतवार २१:३१
अर्घाखाचिकी एलिना रायमाझी अभिनित तिहारको मार्मिक देउसि भैलो गित(भिडियोसहीत)
घोराही । अर्घाखाचिकि एलिना रायमाझी अभिनित मान्छेको मन तिहारको देउसि भैलो गित बजारमा आएको छ । परदेशमा दाजुभाइ हुँदा घरमा दिदीबहिनीको बिरहलाई उक्त गितमा समेटीएको गितमा अभिनय गरेकि रायमाझीले बताइन् । उनले आफुले उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत गरेको पनि बताइन् । यो तिहारको देउससि भैलो गितलाई सबैलाई मन पराइदीने उनले विश्वास गरेकि छिन् । उनको अभिनय
२०७५ कार्तिक २२, बिहीबार ०९:४९
दशरथ घिमिरे दे उखुरी । सरकारले घो षणा गरे का एक सय नया पर्यटकीय गन्तव्यमा दाङको बगारबाबा धाम रिहार पनि परे को छ । यो घो षणासगै पर्यटन विकासमा अघि बढे को रिहार क्षे त्रको थप विकास हुने अपे क्षा गरिएको छ । राजमार्गबीच भागबाट हिडे को छ । उत्तर र दक्षिणमा रिहार धामको क्षे त्र छ । ताल, तलै या, मन्दिरले सुन्दरता थपे को छ । रिहार पुग्नुअघि नुनिलो मै दान छ । त्यहा
चर्चीत लोक गायिका पारु रञ्जितको तिहारको कोसेलि– ‘आयो है तिहार
काठमाडौ । गायिका पारु रञ्जित र गायक पुस्कर सुनुवारको स्वरमा तिहार गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘आयो है तिहार बोलको गीतमा तिहारका केही मौलिक पक्षको चर्चा गरिएको छ । शहरको रमझमले छाँयामा पर्दै गएको देउसी र भैली जस्ता मौलिक पर्व जोगाउन आफुले तिहार गीत सार्वजनिक गरेको पारुको भनाई रहेको छ । देउसी भैलो गीतमा किरण
२०७५ कार्तिक १५, बिहीबार २२:१६
‘तिमी टाढा कता कता‘’ गीतको मुस्ताङमा छायाङ्कन
मुस्ताङ । मुस्ताङको जोमसोमा ‘तिमी टाढा कता कता…’बोलको गीत छायाङ्कन मंगलबार गरिएको छ । कर्ण दाश र प्रश्ना शाक्यको स्वरमा सजिएको गीतमा बसन्त निरौलाले निर्देशन गरेका छन् । पवित्रा आचार्यको कोरियोक्राफी रहेको गीतमा दिव्य सुबेदीले छायाङ्कन गरेका छन् ।सारा सिर्पाली र विजय कार्कीको अभिनय रहेको गीत अरविन्द पौडेलले निर्माण गरेका हुन् । कर्ण दाशको संगीत
२०७५ कार्तिक १४, बुधबार १९:४८
रिलिज भयो ‘मुइ खानलाई आमला’ (भिडियो)
काठमाडौं । गायक एवम् संगीतकार नरेश खाती क्षेत्रीले ठट्यौली शैलीमा ‘मुइ खानलाई आमला…’ बोलको गीत रिलिज गरेका छन् । गीतमा गायिका पविना तामाङले नरेशलाई साथ दिएकी छिन् । गीतको शब्द नरेश आफैले लेखेका हुन् । आधुनिक, लोक तथा दोहोरी लगायतका गीतहरूमा संगीत एवम् स्वर दिँदै आएका नरेशले ठट्यौली शैलीमा गीत ल्याएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन्
२०७५ कार्तिक १४, बुधबार ११:३२
ध्रुवराज न्यौपाने डि.आर.एन ड्राईभरको भूमिकामा स्वस्तिमा खडकालाई अभिनय गराएर यतिखेर चलचित्र बुलबुल चर्चामा रहेको छ । एउटा गीतको काम बाँकी राखेको फिल्म युनिटले हालै मौसम खुलेपछि चारदिन लगाएर छायाँकन सम्पन्न गरेको हो । छायाँकन सकिए लगतै बुलबुल टोलीले खुद्राखाद्री बोलको यस गीत कार्तिक १५ गते ँबिकज ःयद शैली अपनाएर सार्वजनिक गरिने बताएको छ । नेपालका
संगीतमा बिकृति होईन्, परिबर्तन भएको हो’
तुलसीपुरकी रेश्मा केसी लामो समय देखि संगीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । उनको धेरै गीत बजारमा आएका छन् । सानै देखि गीत संगीतमा रुची राख्ने केसी पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रमहरुबाट पनि निकै अफर आउने गरेको छ । उनै केसीसंग सुमन केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । आजभोलि के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ? आजभोलि गीत रेकर्डिङको काम ब्यस्त
२०७५ कार्तिक १०, शनिबार १४:५३
घोराही, कार्तिक ७ । चर्चित लोकगायिका, राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलिले चलचित्र पत्रकारीता पुरस्कार स्थापना गरेकि छिन् । उनले दाङ जिल्लालाई चलचित्र नगरीको रुपमा बिकास गर्न दाङ जिल्लामा रहेर कृयासिल रुपमा चलचित्र पत्रकारिता गर्ने एक जना उत्कृष्ट चलचित्र पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने उदेश्यले सो पुरस्कार स्थापना गरेको बताइन् । कोमलले केही दिन अगाडि रिपोर्टर्स क्वल दाङले
२०७५ कार्तिक ७, बुधबार १९:५८